Tim Cook na-aga n'ihu obere njem nleta ya na ụnyaahụ ọ bụ Germany | Esi m mac
France bu ụzọ (Paris na Marseille) na Germany mgbe emechara. Tim Cook, CEO nke Apple na-aga n'ihu na obere njem nke kọntinent ochie ahụ ma n'ehihie ụnyaahụ, a hụrụ ya n'otu n'ime ụlọ ahịa ndị isi nke ụlọ ọrụ ahụ na Germany nakwa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ika ahụ. Kpamkpam njem nke werela ịtụ anyị niile ọnụ na nke o yiri ka ọ dịghị onye maara ihe ọ bụla n'ihi na emeghị ya ka ọ bụrụ nke a haziri (ihe ọrụ rụkwara n'oge ụfọdụ) Cook, juru ya anya na ọ dị n'ụlọ ahịa ụlọ ọrụ na France ebe ndị ọrụ na ndị ọrụ ụlọ ahịa ahụ juru anya. ezigbo foto dị na CEO nke Apple.
N’ihe banyere Jamanị, onye isi ụlọ ọrụ Apple gara n’otu ụlọ nrụpụta arịa na ụlọ ahịa ya ma mee klaasị kichin kichin obere na ngwa ngwa. N'ebe a, anyị hapụrụ foto nke onye isi ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya were tinye ya su akaụntụ Twitter nkeonwe:
Na nkenke, njem dị jụụ karịa njem azụmahịa site na ihe anyị nwere ike ịhụ na onyonyo, mana nke ahụ enyela mmụọ dị mma nye ndị ọrụ natara ọbịbịa ya. N'aka nke ọzọ, anyị ndị nọ na Spain anọrọla nke dị nso na mba ndị agbata obi anyị nwere olileanya na Esi nri nwere ike ịpụta n'otu n'ime ụlọ ahịa anyị nwere n'ókèala anyịO doro anya na ọ ga-ekpebi nke ahụ, mana ọ ga-adị mma maka ndị ọrụ Apple na mba anyị inwe onye isi ụlọ ọrụ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Tim Cook na-aga n'ihu obere ụzọ nleta ya na ụnyaahụ ọ bụ Germany
BeatsX ga-abata na Applelọ Ahịa Apple na anụ ahụ na February 10